Jawaari oo la kulmay Guddiga Doorashooyinka, lana joojiyay doorashada kursigiisa | Dhacdo
Home Wararka Maanta Jawaari oo la kulmay Guddiga Doorashooyinka, lana joojiyay doorashada kursigiisa
Jawaari oo la kulmay Guddiga Doorashooyinka, lana joojiyay doorashada kursigiisa
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal ayaa shaaca ka qaaday inay hakiyeen, oo ay joojiyeen doorashada kursiga uu tirsigiisu yahay #HOP103, kaas oo uu u sharaxnaa Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Gudoomiyihii hore ee Golaha Shacabka.
Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta Magaalada Muqdisho kula kulmay Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal, isagoona u gudbiyay cabashadiisa ku aaddan in Arbacadii laga hor istaagay shahaadada musharaxnimada xubinimadiisa Golaha Shacabka.
Guddiga Doorashooyinka ayaa Maamulka Guddiga Doorahada Koonfur Galbeed faray inay joojiyaan doorashada kursigaasi, illaa amar dambe.
“Waxaan faraynaa Guddoonka iyo Guddiga Doorashada Koonfur Galbeed in la joojiyo qabashada doorashada kursiga tirsigiisu yahay 103, illaa amar dambe.” Ayaa lagu sheegay warsaxaafadeed ka soo baxay Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal.
Previous articleHalista uu leeyahay faraca cusub ee Coronavirus (Omicron)
Next articleProf. Maxamed Cabdullaahi Ciise oo loo magacaabay Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada